Fav.or.it Kutanga Kuongorora | Martech Zone
Fav.or.it Kutanga Kuongorora
Chitatu, Nyamavhuvhu 15, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nick Halstead nechikwata chakatangisa Fav.or.it, chinzvimbo chakapfuma munharaunda yakavakirwa feed kuverenga system. Heino vhidhiyo ipfupi inotsanangura tekinoroji uye nei ichi chiri chakanaka kufambira mberi mukutsvaga nekukurukura zvirikuru zvemukati:
Izvo Zvishoma zvandinotarisa, Izvo Zvirinani Zvinhu Zvinowana!
Google Analytics: Kutevera Yechitatu Yevatatu Peji
Aug 17, 2007 na2:01 PM
Iyo ine yakanaka interface uye inonakidza zita rezita, asi kune akawanda akawanda simialr masaiti ari kuyedza kupinda mumhando idzi dzemisika izvozvi. Vakomana vahombe vakatoteedzera chirevo chavo uye zvichanetsa kuvazunza.
Uye zvechokwadi, ivo vachazofanira kupinda muhondo dze spam senge masaiti usch sezvakaita Digg.